Xasan Shiikh oo sheegay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka uu dhici doono 15-ka December - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaXasan Shiikh oo sheegay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka uu dhici doono 15-ka December
December 13, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa cadeeyay in fadhiga kowaad ee baarlamaanka Soomaaliya uu dhici doono 15-ka bishaan December.
“Kulanka kowaad ee baarlamaanka waxa uu dhici doonaa 15-ka December, sida qorshuhu yahay.” Xasan Shiikh ayaa sidaa ku yiri bayaan kasoo baxay Villa Soomaaliya.
Ilaa iyo hadda, xildhibaano ka badan 240 ayaa lasoo doortay. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka kooban 275 xubnnood.
Xildhibaanada cusub ee aqalka hoose ayaa dooran doona madaxweynaha cusub ee Soomaaliya 28-da bisha December, sida lagu sheegay bayaan ay soo-saareen hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen Muqdisho asbuucii lasoo dhaafay.
Madaxweynaha wakhtigiisu gabaabsiga yahay, Xasan Shiikh Maxamuud oo la doortay 2012-kii, ayaa u taagan doorasho labaad.
Musharixiinta ugu culus ee la loolamaya waxaa kamid ah Raysulwasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo madaxweynihii hore Shiikh Shariif Shiikh Axmed.
November 30, 2016 Doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo Muqdisho ka bilaabmatay
April 16, 2017 Dagaalyahano ISIS katirsan oo weeraray tuulada Dasaan ee gobolka Bari
July 25, 2017 Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee Faransiiska u qaabilsan Soomaaliya
Mareykanka oo qaaday weerar duqayn ah oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Mareykanka ayaa qaaday weerar duqayn ah oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen milatariga Mareykanka. Duqaynta ayaa dhacday maalintii Axada, sida ay sheegeen saraakiisha taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM). “Hadda waxaanu wadnaa [...]